१०२ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, कतिले प्रयोग गर्छन फोरजी ? - Arthatantra.com
१०२ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा, कतिले प्रयोग गर्छन फोरजी ?
काठमाडौं । नेपालमा जनसंख्या भन्दा बढी मानिसले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा लिएको एक तथ्याङकले देखाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म १०२ प्रतिशत जनसंख्यामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहँुच पुगेको छ । जसमा मोबाइल ब्रोडब्याण्ड ७६.०३ प्रतिशत, फिक्स ब्रोडब्याण्ड वायर २५.६६ प्रतिशत, फिक्स ब्रोडब्याण्ड वायरलेस ०.७० प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार असारसम्ममा ३ करोड ९ लाख ५४ हजार १४५ जना नेपालीमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुगेको छ । तथ्याङक विभागले जनगणनाको तयारी गरिरहेको छ । अहिले नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड रहेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । यसको तथ्याङक एकिन हुन सकेको छैन । ३ करोडलाई आधार मन्ने हो भने पनि नेपालको जनसंख्या भन्दा बढी मानिसमा ब्रोडब्याण्ड सेवा पुगेको देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार जेठमा २ करोड ७७ लाख ६ हजार ७ सय ११ जनाले ब्रोडब्याण्ड सेवा लिएका थिए भने असारमा बढेर ३ करोड ९ लाख ५४ हजार १४५ जना पुगेका छन् । जेठमा नेपाल टेलिकमको १ करोड ३८ लाख ६८ हजार ३५८, एनसेलको ७२ लाख ६७ हजार ३२० जना र स्मार्ट टेलिकमको १ लाख ५१ हजार ७१५ जना ग्राहकले इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
असारमा भने नेपाल टेलिकमको १ करोड ६७ लाख २९ हजार २२९, एनसेलको ७५ लाख ५ हजार ५९४ जना र स्मार्ट टेलिकमको १ लाख ६६ हजार ७४६ जनाले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ९९ लाख ५४ हजार ११९ जनाले फोरजी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा तीन वटा कम्पनीले फोरजी सेवा दिइरहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी एनसेलका ग्राहक रहेका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम दोस्रो स्थानमा रहेको छ र भने स्मार्ट टेलिकम तेस्रो स्थानमा रहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ५० लाख ४२ हजार ९९८ जना ग्राहकले एनसेलको फोरजी प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमको फोरजी प्रयोग गर्ने ग्राहक ४७ लाख ४४ हजार ३७५ जना रहेका छन् भने स्मार्ट टेलिकमको फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या १ लाख ६६ हजार ७४६ जना पुगेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्ममा १ करोड २८ लाख ९४ हजार ३३५ जनाको पहुँचमा थ्रिजी इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा नेपाल टेलिकमको रहेको छ । टेलिकमको १ करोड ४ लाख ३१ हजार ७३९ र एनसेलको २४ लाख ६२ हजार ५९६ जना प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
वि.सं.२०७८ भदौ २८ सोमवार १३:०२ मा प्रकाशित
अघिल्लाे यी स्थानको शाखा कार्यालयहरु बिक्री गर्दै सिटिजन्स बैंक
पछिल्लाे मानुषी लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी